एनआरएनमा पनि जातीय वर्ग व्यवस्था लागु भइसक्यो ! - Himalayan Kangaroo
एनआरएनमा पनि जातीय वर्ग व्यवस्था लागु भइसक्यो !
Posted by Himalayan Kangaroo | ३० मंसिर २०७६, सोमबार ०१:०४ |
वर्ग भनेको हुनेहरु र नहुनेहरुको हो । आफ्नोे भाषामा जीवन चलाउन पाउने र चलाउन नपाउनेहरुबीचको समस्या हो । राम्रोसँग खान पाउनु या नपाउनुको फरकमात्रै वर्ग होइन रहेछ । सम्मानपूर्वक पुरुषजसरी बाँच्न पाउनु पर्‍यो ।
यसरी हेर्दा आजका मानिसको सुखदुखलाई हेर्ने हो भने वर्गको कथा कहाँबाट सुरु भयो त्यहीं पुग्नुपर्ने रहेछ । वर्गविन्यासको इतिहासको कुरा गरौं भन्दा अहिलेको कुरा गरौं इतिहासको कुरा किन गर्नु ? भन्ने मान्छे पनि भेटाएको छु । त्यो बेला इतिहासको कुरा नगरौं भन्ने मान्छेहरुलाई फेरि भन्न मन लागिहाल्छ आफ्नो उमेरको कुरा नगरेर कसरी वर्तमानको कुरा गर्ने ? इतिहास कसरी बन्यो भन्नेबारे कुरा नगर्ने हो भने केही पनि हुँदैन ।
यही फेस्टिबलकै अघिल्लो संस्करणमा मेरो बोल्ने विषय जंगबहादुरको मुलुकी ऐनबारे थियो । तर, कारणवश उपस्थित हुन सकिनँ । अहिले त्यही कुरा जोडेर आफ्नो कुरा अघि बढाउँछु । त्यतिबेलाको ऐनमा प्रत्येक मान्छेका जातका आधारमा उसलाई सजाय तोकिएको छ । फेरि यो जातको कुरा गर्दा कतिपयलाई कानबाट धुवाँ पनि छुट्ने गर्छ । किन यो जातको मात्रै कुरा गर्‍या होला पनि भन्छन् ।
तर, यदि मैले जातको कुरा गर्छु भने त्यो जंगबहादुरले सुरु गरेको हो । यो समाज त जंगबहादुरले नै बनाएको हो । नेपाल यस्तो समाज रहेछ, कि जात नै वर्गको निर्णायक बन्न गएको छ । नेपाली समाज यहाँसम्म आइपुग्दा पनि गर्व निर्माण धनी, गरिबको निर्माणमा सबैभन्दा बढी जातले भूमिका खेलेको छ ।
जब जंगबहादुर राणा, पृथ्वीनारायण शाह वा त्योभन्दा अघिबाट मुख्य समस्या जमिन थियो । जमिन नै सम्पत्तिको मुख्य स्रोत थियो । त्यो जमिन केको आधारमा बाँडियो त भन्दा जातको आधारमा । बिर्ताका आधारमा जमिन दिइन्थ्यो । नेपालमा दलितले कहिले पनि बिर्तामा जमिन पाएनन् ।
मतवाली जातमा नेवार, गुरुङ, मगर राई, लिम्बु, सुनुवार यी बाहेककालाई मासिन्या मतवालीमा राखियो । त्यसबाट उनीहरुले बिर्तामा जमिन पाउनबाट वञ्चित भए ।
नमासिन्याहरु मतवाली जुन छन्, अपवादका रुपमा जमिन पाए । भनेपछि कानूनले व्यवस्था गरेर यो जातजातिका मान्छे गरिब हुनुपर्ने भनेर किटान गरियो । त्यसैले त्यो बेला निर्णायकमा जमिन थियो र जमिन कसको हुने भन्ने व्यवस्थाले नै नेपालमा मुख्य वर्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु भयो ।
अर्को फेरि जातीय उत्पीडन भन्ने आएको छ । आज अपराधका जुनसुकै घटना हेरे भने धेरैजस्तो अपराधका घटना आरोपीको नाममध्ये एउटा नाम जरुर तामाङको हुन्छ । पछिल्लो केही वर्षमा एउटा नाम दलितको पनि थपिन सुरु भएको छ । तर, अपराधको कोणबाट हेरे पनि समाजको अवस्था छर्लंग देखिँदोरहेछ ।
यो बलात्कारका घटना हेर्ने हो भने १० वर्षमा धेरै महिला दलित नै भएका रहेछन् । नेपालमा १३ प्रतिशत दलितको संख्या छ । त्यसमध्ये पनि १६ प्रतिशत बलात्कारकै शिकार भएका रहेछन् । ३६ प्रतिशत रहेका जनजाति महिलामा ३२ प्रतिशत बलात्कार भएका रहेछन् । संविधानमा लेखेको भाषामा खसआर्य, त्यसको बलात्कार संख्या भने जम्मा ९ प्रतिशतमात्रै छ । अपराधलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि निश्चित जात व्यवस्था देखिन्छ ।
नेपालमा वर्ग निर्माणको मुख्य कारण एउटा जात व्यवस्था र अर्को जातीय उत्पीडन हो ।
तेस्रोमा छ, क्षेत्रीय उत्पीडन । यो उपेक्षा हो । भेरी नदी पारि र कर्णाली पारि फरक छ । भेरि नदी पारी दमन होइन उपेक्षा गरिएको रहेछ । कर्णाली नदी पारि नियोजित रुपमा दमन नै गरिएको छ ।
मान्छेहरु भन्छन्, कर्णालीको बाहुन र काठमाडौंको दलितबीच पनि फरक देख । यो एकदम सत्य कुरा हो । तर, कर्णालीको बाहुनसँग कर्णालीकै दलितबारेचाहिँ कस्ले बोलिदिने ? त्यो उत्तर त प्रश्नभित्रै कतै हराएको छ ।
अर्कोतिर हिमाली क्षेत्रलाई पनि उत्पीडन गरियो । छिमेकी हो । तर चाडपर्व या रमाइलो जमघटमा बोलाइँदैन । वेवास्ता गरिदिनु मात्रै पनि ठूलो उत्पीडन हो । अर्को भएको छ मधेशमाथि एउटा क्षेत्रीय, अर्को भाषिक साँस्कृतिक । २७ सालभन्दा पहिले सबैभन्दा बढी शिक्षित हुने जिल्लामध्ये सप्तरी पनि हो । तर जब पहाडवादी शिक्षा लागु भयो आजको सप्तरीको शिक्षाको हालत के छ भन्ने थाहा नै छ । कुरा त्यहाँ रंगभेदतिर पनि गयो ।
विगतदेखि यसरी जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडन हुँदा नेपालमा वर्ग हुन गयो ।
केही व्यवस्थाहरु यसरी निर्माण भए कि शासकले थाहा नपाइकन वर्ग निर्माणको प्रक्रिया भत्किन पुगेको छ । जस्तो कि पश्चिम नेपालका दलितहरु । उनीहरु अधिकांश जमिन भन्ने कुरा थिएन । उनीहरु मुग्लान जान्थे । मुग्लानमा त दलित भन्ने कुरा भएन । बाहिर गइसकेपछि त सबै नेपाली नै हो ।
त्यहाँ उनीहरुले बाली पनि पाउँथे । नगद पनि पाउँथे । त्यही पैसा जोहो गरेर सम्पत्ति जोड्न थाले । ती दलितको धान खाने खेतैबाट आयो भने त्यो मुग्लानबाटै हो । त्यसले जमिन नहुने भन्ने व्यवस्थालाई थोरै तोडिदियो ।
राणाहरुले केही जातलाई भारतीय सेनामा पठाउने सम्झौता गरे । यो त नेपालीको लागि कति अपमानको कुरा छ कि पैसाका निम्ति अर्काको भाडाको सिपाही भएर बस्नुपरेको छ । गल्लावालले छान्दैछान्दै लैजानुपर्ने, उनीहरुका निम्ति हामी मरिदिनुपर्ने । मरेपछि छात्तिमा तक्मा राखेर भनिदिनुपर्ने, वीर नेपालीहरु ।
तर यसको पनि एउटा उल्टो फाइदा भयो । लाहुरेहरुले नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याए । धेरै मोल भएको पैसा नेपाल आयो । त्यसपछि उनीहरुले धरान, भैरहवा, बुटवलमा घर बनाए । त्यो कथा पोखरासँग पनि जोडिन्छ ।
यो देखिने हिमालले मात्रै पोखरा बोकेको छ जस्तो लाग्दैन । फेवातालभन्दा गहिरो लाहुर जानुपर्ने नेपालीको कथाले पनि पोखरा बनेको छ । त्यो लाहुर जाने कथा नेपालको पुरानो जात व्यवस्थाले बनाएको वर्गीय समाजलाई विस्तारविस्तारै काट्दै गयो । एउटा अचम्मकोे तरबार हान्यो । केही सहर त लाहुरेहरुले नै बनाए ।
यदि राणाहरुलाई आज लाहुरे यो स्थानमा आइपुग्छ भन्ने थाहा पाएको भए धरानमा चिटिक्क परेको घर एउटा लिम्बुले बनाउनेछ । पोखरामा कुनै मगर या गुरुङले बनाउनेछ । त्यतिबेला उनीहरुले गोर्खा भर्तीसन्धी गरिँदैन थियो । कानुन गलत थियो । तर, त्यसबाट उल्टै फाइदा पुग्यो । वर्ग संरचनालाई थोरै भए पनि खल्बल्याइदियो ।
सुनारको कथा पनि त्यही छ । लाहुरबाट लाहुरे नगद बोकेर नेपाल आए उनीहरुले सुनको काम गर्ने सुनारलाई सुन बनाउन लगायो । सुनको व्यापार त १२ प्रतिशत हाकाहाक्की भनेरै खान पाइन्छ । त्यसपछि उनीहरुको अवस्था सुध्रियो । सुन त सुनै हो । जसलाई पनि आकर्षित गर्ने । त्यो कामी (म कामी नै भन्छु) लाई कहाँ अधिकार थियो र घर बनाउने ? जंगबहादुरले थाहा पाएको भए उहिल्यै रोकिदिन्थ्यो । जात व्यवस्थाले बनाएको बन्धनलाई लाहुरे प्रथाले केही न केही पद्धतिलाई चर्काइदिएको छ ।
अर्को चाहिँ २ वटा जातले यो वर्ग व्यवस्थालाई नराम्रैसँग छलिदिए । एउटा तराईको कायस्थ, अर्को थकाली ।
थकाली त मासिन्या वर्गमा थियो नि होइन ? तर, अहिले थकाली खानाको रेस्टुरेन्ट देशैभरि छ । उनीहरुलाई फेरि आफ्नो कामका लागि जनसंख्या नै पुग्दैन । सीमानामा बसेर व्यापार गरेजस्तो गर्ने राजा महेन्द्रले नचिनेको थकाली काठमाडौंलाई थाहै नदिई काठमाडौंलाई जितिदयो । त्यतिबेला राणाहरुले थाहा पाउँथे भने अर्कै कुरा हुन्थ्यो ।
तराईको कायस्थ पनि त्यही हो । मुन्सीको काम गर्न राखेको मान्छे नेपाली समाजको पहिलो लहरमा आइपुगेको छ । जात व्यवस्थाले कज्याउन खोजेको कायस्थ आज शिक्षाको घोडा चढेर कहाँ पुगेको छ । त्यतिबेला त मुन्सी बनाएको हो त र मुन्सी बन्न त हिसाब जान्नुपर्‍यो । त्यतिबेला पो शिक्षाको महत्व थिएन, अहिले त छ नि ।
अर्को प्रसंग छ सगरमाथा । युरोपेलीले सुरु गरे एडभेन्चर अर्थात साहसी । नेपाल आए सगरमाथालाई एभरेस्ट नाम दिए । त्यहाँ शेर्पालाई भारी बोकाएर लगियो । हिमालमा त उसकै फोक्सो चाहियो फेरि । त्यहाँ बस्दाबस्दा सबैभन्दा माथिसम्म श्वास फेर्न सक्ने भयो ।
अरुको भारी बोकेर हिमाल चढ्दा चढ्दा शेर्पाको एउटा सानो खलक काठमाडौंदेखि अमेरिकासम्म पुग्यो । त्यसले पनि वर्ग व्यवस्थालाई भत्काइदियो । यो कुनै नेपाली समाजले आफैं भत्काइदिएको त होइन । हिमाल चढ्ने यात्रा अरुले सुरु गरे । तर, फाइदा शेर्पाले लिए ।
अर्को एउटा प्रसंग छ मनाङको ।
माथिल्लो मनाङमा ५ वटा गाविस थिए । अहिले मनाङमा भोट हाल्नु पर्‍यो भने त्यहाँका मान्छे प्लेन वा हेलिकप्टर रिजर्ब गरेर आउँछन् । सबैजसोको काठमाडौंमा घर छ । यो कसरी सम्भव भयो ? यसको गजब कुरा छ ।
२१ सालतिर राजा महेन्द्र सिंगापुर गएछन् । त्यतिबेला नेपालकै अनुहार भएका मान्छे जडिबुटी बेचिरहेको भेटेछन् । उनी फेरि त्यस्ता राजा हुन्, बर्मासम्म पुगेर नेपाली फर्काउने मान्छे हुन् ।
सिंगापुरमा गएर पनि नेपाली अनुहारका भेटपछि खोजीनीति गरेछन् । त्यतिबेला मनाङमुस्ताङका मान्छे भन्ने थाहा भएछ । मस्र्याङ्दी शीरदेखि आएका भनेका रहेछन् । उनीहरुले भनिसकेपछि राजाले नेपाल आउन भनेछन् । तर उनीहरु आउन राजी भएनन् ।
त्यतिबेला उनले व्यापारका लागि कर छूट गर्ने र मस्र्यांदीसम्मको ठाउँ नेपालमा पार्ने गरी सम्झौता भयो । सिकेलालको भाषा नेपालीय भएपछि उनीहरुले भन्सार तिर्नु परेन । अधिकार नपाउँदा त सिंगापुर गएर व्यापार गर्थे भने अधिकार पाएपछि दोहोरो फाइदा भइहाल्यो । त्यहाँबाट माथिल्लो मनाङको जीवनस्तर उकासियो ।
यी उदाहरण भनेको नेपालको शाषण व्यवस्थाले बनाएको वर्ग व्यवस्थालाई घुमेर, छिर्के हानेर, भित्र घुसेर, छिरेर केही न केही बदलिए । तर, अहिलेसम्म वर्ग चरित्र बदलिएको छैन । पत्रिका हेर्‍यो, उही अनुहार हुन्छ । हुँदाहुँदा एनआरएनमा पनि जातीय वर्ग व्यवस्था लागु भइसक्यो ।
पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलको तेस्रो दिन भएको ‘नेपाली समाजको वर्गविन्यास’ विषयक सेसनमा आहुतिले राखेको विचार
Previousचलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भट्टराईको निधन
Nextबुद्ध जयन्तीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने
३० पुष २०७५, सोमबार ०३:१२